Petition · Free Burma/Myanmar Peace Activists · Change.org
Free Burma/Myanmar Peace Activists
Asking for peace in Burma has becomeacrime under the pro democratic and civilian government.
In May 2018 alone there were 49 Human rights defenders being charged and imprisoned for calling for peace.
Activist Lum Zawng was charged by the Myanmar police under the Peaceful Assembly Law Article (19), and by the military under Penal Code section 500 simply for asking that 2000 civilians trapped inaconflict zone were allowed passage to safety.
For asking for peace and safety of civilians Lum Zwang could face up to two years in jail.
In April this year there was renewed fighting in the Kachin State in Burma. This clash alone trapped over 2000 people in the conflict-affected areas, in the Northern part of Burma. From previous fighting in the past7years there are over 120,000 internally displaced people in Kachin State, alone.
To protest these IDP’s being trapped and call for peace in Burma, Lum Zwang and his friends gathered in Yangon, Mandalay, Pegu, Kachin and Chin State. Their peaceful protests were met withaviolent crackdown by Burmese authorities who arrested more than 50 protestors.
By this action, it is clear that the security of the human rights defenders is still at high risk in Burma under the pro democratic civilian government.
We demand the unconditional release of all the human rights defenders and peace activists from these notorious and oppressive charges.
We also demand Burmese Army stops bombing and shelling on civilians in Myanmar and allow humanitarian aid to the IDPs.
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အရပ်သားအစိုးရ လက်ထက်တွင် နိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တောင်းဆို မှုသည် ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ တစ်လတည်းတွင် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများ ၅၀ ဦးခန့် ငြိမ်းချမ်း ရေး အတွက် တောင်းဆိုမှုကြောင့် အမှုစွဲဆိုခြင်း ခံရခဲ့သည်။
လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် လွမ်းဇောင်းသည် မြန်မာတပ်မတော်မှ ကချင်ပြည်နယ် တွင်ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် ပိတ်မိနေသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ ၂၀၀၀ ကျော်ကို လုံခြုံဘေးကင်းသည့်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပုဒ်မ ၁၉ အရ ငြိမ်းစုစီဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထို့ပြင် မြန်မာတပ်မတော်မှ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ (၅၀၀) အရ အသရေဖျက်မှု နှင့်လည်းကောင်း တရားလိုပြုလုပ်ပြီး တရားစွဲဆို အမှုဖွင့်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ဘေးလွတ်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တောင်းဆိုသည့်အတွက်ကြောင့် လွမ်းဇောင်းသည် ပြစ်မှုတစ်စုံတရာ ထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်ထိ ကျခံနိုင်မည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက် ခိုက်မှု တဖန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး စစ်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာတွင် ပြည်သူများ ၂၀၀၀ ကျော်ခန့် ပိတ်မိနေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၇ နှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် ဦးရေ ၁၂၀၀၀၀ ကျော်အထိ တိုးပွားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပိတ်မိနေသည့် ပြည်သူများ လွတ်မြောက်ရန်အတွက် လွမ်းဇောင်းနှင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ လွိုင်ကော်၊ ဖယ်ခုံနှင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသည့် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများမှလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ မိမိ၏ ဆန္ဒများကို ထုတ်ဖော် ခဲ့ကြရာမှ မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များမှ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အယောက်(၅၀) ကျော် ဖမ်းခံခဲ့ရပါသည်။
ဤလုပ်ရပ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရပ်သားအစိုးရ လက်အောက်တွင် လူ့အခွင်အရေး လှုပ်ရှားသူများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိသည့်အပြင် ကြီးမားသော အန္တရာယ်ရှိနေသေးသည်ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
ဖိနှိပ်သောဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရသည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူများကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပေးရန်တောင်းဆိုပါသည်။မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် လူသားဒိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်နှင့် ပြည်တွင်းစစ်ရှောင်ပြည်သူများ အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးပါရန် တောင်းဆိုလိုပါသည်။